Pro/E အကြောင်လေးတွေ share ရအောင်
Pro/E အကြောင်လေးတွေ share ရအောင်
Thread: Pro/E အကြောင်လေးတွေ share ရအောင်
07-21-2012 06:36 PM #11
ဒီ feature လေးကတော့ ဒုရှိတဲ့ model ကို မျက်နာပြင်အပေါက်နဲ့ shell ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်…shell thickness ကိုလဲကြိုက်နှစ်သက်သလိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ လက်တွေလုပ်ကြည့်ရအောင် ရှေကပြောခဲ့တဲဟာလေးတွေပါထည်ပြီးသုံးကြည်မယ်နော်…working directory တို့ save လုပ်တာတို့…
ပထမဆုံး Pro E ကို run လိုက်ပါမယ် ပြီးရင် file menu> set working directory
ပြီးရင် ကျွန်တော့် ကွန်ပြူတာထဲကို သွားတယ်
နောက်ဆုံးမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ directory ရောက်ရင် ok နှိပ်လိုက်ပါ working directory သတ်မှတ်ပြီးပါပြီး
ကျွန်တော် ပုံဆွဲတာကို detail မဆွဲတော့ဘူးနော် မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံကို ဆွဲလိုက်ပါ … မဆွဲတတ်သေးရင် အစ်ကို ကိုဆန်းရဲ့ Pro E သင်ခန်းစာ post မှာဖတ်ပေးပါနော်….ကျွန်တော်ကတော့ box shape တစ်ခုကို ဆွဲထားပါတယ်….
ဆွဲပြီးသွားရင် ညာဘက်ထောင့်လေးမှာ shell tools ဆိုတာလေးရှိပါတယ် သူကို click လုပ်လိုက်ပါ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းတွေ့မြင်ရမှာပါ။
ပြီး၇င်မိမိ shell ဖောက်ချင်သောမျက်နှာပြင်ကို select လုပ်ပါ။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ shell thickness ကို ဘယ်ဘက်ဒေါင့်လေးမှာ ပေးပါ ….ဒါမှမဟုတ် model တွင် ပြာဘောင်ခတ်ထားသောနေရာတွင် double click နှိပ်ပြီးတော့ thickness ထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ပြီးရင် အမှန်ချစ်လေးကို click (or) middle wheel ကို တစ်ချက်နှိပ်ပါ။အောက်မှာ shell လုပ်ထားတဲ့ model လေးတစ်ခုကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
****ဒီနေရာမှာ သတိထားရမှာလေးပြောချင်ပါတယ် shell feature ဟာ model ( model ဆိုတာက feature တွေအများကြီးပေါင်းထားတာလေ) ရဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ feature အကုန်ကို shell လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်…shell feature သုံးပြီးနောက်ထပ်ထပ်ပေါင်းတဲ့ feature တွေကိုတော့ shell လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး….အဲဒါမလို့ model တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ feature တွေအသုံးပြုမှု order ကိုလဲ အဒိကကျပြီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်*****
ကျန်တဲ့ save လုပ်တဲ့ အပိုင်းကို မိမိဘာသာစပ်ကြည့်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်……
The Following3Users Say Thank You to imzero For This Useful Post:
nyeinchanhtay, tunaungkyaw, ကိုထွန်း
07-21-2012 06:46 PM #12
ကျန်ရှိသေးသော pick and place feature မျာကို ဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးသွားပါအုန်မယ်ခင်ဗျာ ...နောက်ပြီး pro/e ကို လက်တွေတွင်အသုံးပြုနေသူများ၊ engineer များ၊ ဒါအပြင် pro/E ရဲ့ advance ပိုင်းဆိုင်ရာများကို လည်း သင်းကြားပေးစေလိုပါတယ် ..ကျွန်အနေနဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှား အမှားအရွင်းရှိခဲ့ရင် ပြင်ဆင်ပြီး လမ်းပြပေးကြပါခင်ဗျာ...နောက်ပြီးပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြားပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်....
The Following2Users Say Thank You to imzero For This Useful Post:
07-22-2012 12:26 AM #13
Round feature ကတော့ edges တွေ ဒါမှမဟုတ် ကပ်လျှက်ရှိတဲ့ surface တွေကို round လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် Round feature မှာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်
ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ် simple round မှာဆိုရင် default round shape and transition ဆိုပြီးပြူလုပ်နိုင်ပါတယ်. Advance မှာဆိုရင်တော့ user-defined round and transition
-Transition ဆိုတာကတော့ ဘယ်နေရာမှာပိုသိသာလဲဆိုရင် coordinate system တစ်ခုကိုမြင်ကြည်လိုက်ပါ box တစ်ခုရဲ့ထောင့်တစ်နေရာပေါ့ဗျာ အဲဒီ့ဒေါင့်မှာ အနား သုံးခုစုဆုံတဲ့နေရာလေ ၊ အနားတစ်ခုချင်းစီကို round မယ်ဆိုရင် အဲဒီ့အနားသုံးခုစုဆုံတဲ့နေရာမှာ transition လေးတစ်ခုလာဖြစ်တာပေါ့ …ပြောချင်တာတစ်ဖက် 3” radius နဲ့ round ပြီတော့ ကျန်အနား နှစ်ဖက်က 2” radius နဲ့ round မယ်ဆိုရင် သူ့ transition က ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းသွားနိုင်တယ်လေ …အဲဒိ့transition shape ကို advance round မှာ edit လုပ်နိုင်ပါတယ်… user-defined round ဆိုတာကတော့အောက်မှာ ဥပမာလေးပေးရင်းနဲ့ပြောသွားပါမယ်…
ကျွန်တော်တို့အောက်မှာလက်တွေလေးလုပ်ကြည်ရအောင်…ကျွန်တော်ပုံတွေကိုတော့ ဥပမာပေးတာဖြစ်တဲအတွက်တကြောင့် detail တော့မဆွဲပြတော့ဘူးနော် ဒီ basic pick and place features လေးတွေဆွေးနွေးပြီးတော့မှ detail တစ်ပုံလောက်ဆွဲကြမယ်လေ…. ဟုတ်တယ်ဟုတ် အောက်မှာပုံလေးနှစ်ပုံပြထာပါတယ်… working directory သတ်မှတ်ဖို့မမေ့နဲ့အုန်းနော်…
Round tools ဆိုတာလေးကို click လုပ်ပါ ပြီရင် အောက်မှာပြထားတဲအတိုင်း edge တစ်ခုကို select လုပ်ပါအောက်ကပုံအတိုင်းတွေ့မြင်ရမှာပါ ….နောက်ထက်ပြောစရာလေးရှိတာကတော့ ဘယ်ဖက်ထောင်းလေးမှာ sets ဆိုတာလေးကို click နှိပ်ပါ အဲဒီမှာ set1 ဆိုတာက ယခု round လုပ်မဲ့ ဟာကိုပြောတာပါ တကယ်လို့မျာ မိမိ edge နှစ်ခုကို select လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ set1, set2 ဆိုပြီပေါ်နေမှာပါ ၄င်းရဲ့ဘေးမှ pull down လေးကို click လုပ်ပါ အဲဒါကတော့ round type တွေပါ conic ဆိုရင် round လုပ်မဲ့ arc ရဲ့ radius ကို ရောပေးရမှာပါ ၊ circular ဆိုရင်တော့ radius တစ်ခုတည်းပါ၊ D1 * D2 ဆိုတာကတော့ conic နဲ့နည်းနည်းဆင်ပေမဲ့ dimension ပေးတာချင်းမတူပါဘူး…မိမိဘာသာ စမ်းသပ်ကြည်နိုင်မယ်လို့ထင့်ပါတယ်…အောက်က reference ဆိုတာကတော့ ယခု select လုပ်ထာတဲ့ model ရဲ့ edge ပါ… အောက်က radius (ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာလေးတွေကို ဘောင်ခတ်ပြထားတယ်နော်)..ဆိုတာကတော့ round လုပ်မဲ့ radius ပါ ….
ဒါ simple round လုပ်ကြည်ံတာပဲရှသေးတယ်နော် ကဲ ပြီးသွားရင် round လုပ်မဲ့ radius ကို ပေးပြီး OK ကို click လုပ်လိုက်ပါ….အောက်ကပုံလေးအတိုင်းမြင်တွေ့ရမှာပါ. နောက်ပြီး ဘေးက model tree လေးကို လဲ ကြည့်လိုက်ပါအုန်း ကျွန်တော်တို့ feature base modeling ဆိုတာလေးကိုလေ ကျွန်တော်ရှေမှာဖေားထားတယ် …ဟဲဟဲ
Last edited by imzero; 07-22-2012 at 12:28 AM.
07-22-2012 12:32 AM #14
Advance or variable round
ရှေကအတိုင်းပဲ ပုံမှာ edge တစ်ခုကို select လုပ်လိုက်ပါ…ပြီးရင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ အဲဒီ့ select လုပ်ထားတဲ့ နေရာမှာပဲ right click တစ်ချက်နှိပ်ပါ…ပြီရင် make variable ဆိုတာကို ရွှေးလိုက်ပါ….ဒါဆိုရင် စောကလို ပွိုင့်က တစ်ပွိုင့်တည်းမဟုတ်တော့ပဲ edge ရဲ့ အစွန်းတစ်ဖက်စီမှာ တစ်ပွိုင့်စီ တွေရပါလိမ့်မယ် (control point ကိုပြောတာနော်).. ပွိုင့်တစ်ခုချင်းစီကို radius တစ်မျိုးစီပေးပြီးပြူလုပ်ထားပုံကိုအောက်တွင် လေးလာကြည့်ပါ….
အင်းမေးစရာတော့ရှိလာပြီ ဟုတ်ပါပြီ variable radius ဆိုတော့ radius က နှစ်ခုတည်းကစားလို့ရတာလား။။။ သားက radius ကို နေရာအမျိုးမျုိးမှာပေးချင်တာ…ဟီးဟီး …ရပါတယ် နောက်ထပ် control radius point တွေထပ်ပေါင်းလိုက်ရုံပေါ့ ….အင်းဘယ်မှာပေါင်းမှာလဲဆိုတော့…ကျွန်တော်ဘောင်လေးခတ်ထားပါတယ် အဲဒီအကွက်ထဲမှာ right click နှိပ်ပြီး add radius ဆိုတာကို click လုပ်လိုကတာနဲ့နောက်ထပ် control point တစ်ခု ဘွားခနဲပေါ်လာရော ..ကြိုက်သလောက်တာထည်ပေတော့…control point location တွေကိုလဲ location ဆိုတဲ column မှာ ပြင်နိုင်သလို manually control point ကို click လုပ်ပြီးရွှေပြောင်းနိုင်ပါတယ်…အောက်မှာ ပုံလေးကိုလေ့လာကြည်ပါ….
ပြီရင်တော့ OK နှိပ်လိုက်ပါ….
The Following User Says Thank You to imzero For This Useful Post:
07-22-2012 12:39 AM #15
အခု ကျွန်တော် transition အကြောင်းလေးကို ဆွေးနွေးပါမယ်…ပုံမှာ box ရဲ့ အတွင်း အနားသုံးခုကို select လုပ်ထားပါတယ် ပထမအနာမှလွဲပြီးကျန်အနားတွေကို select လုပ်တဲ့အခါ Ctrl key ကိုနှိပ်ထားရပါမယ်….အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်ပါ….
ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ ဘယ်ဘက်ထောင့်လေးမှာ switch to transition mode ဆိုတဲ့ icon လေးကိုနှိပ်ပါ (ဘောင်ခတ်ထား) ပြီး၇င်တော့ model ပေါ်က transition နေရာလေကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါ နှိပ်ပြီးသွားရင် စောကပြောခဲတဲ့ switch to transition mode ရဲ့ဘေးမှာ tradition type pull down လေးကို တွေရမှာ ပါ အဲဒီမှာ transition type တွေကိူ ချိန်းကြည်ပြီး transition style တွေကိူ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် ….မိမိ စိတ်ကြိုက် transition style ရပြီဆိုရင်တော့ OK နှိပ်လိုကပ်ပါ …… နောက်ဆုံးထွက်လာတဲပုံကိုတော့မပြတော့ပါဘူးနော် မလိုအပ်ပဲပုံတွေများနေမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။
အားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျော်လင့်ပါတယ် ...အတတ်နိုင်ဆုံး ရှင်းလင်းအောင်တော့ရေးသားထားပါတယ်.. MEF မိသားစုဝင်များအားလုံး ဒီထက်မက ပညာများဖြန့်ဝေ ပေးနိုင်ကြပါစေလို့အမြဲဆုတောင်းလျှက် .............ဆက်လက်ဆွေးသွားပါအုန်းမည်
Last edited by imzero; 07-22-2012 at 12:41 AM.
07-24-2012 12:05 AM #16
Chamfers ဆိုတာကတော့ အနားရှိတဲ့ 3D ပုံးကို round လိုလုံးတာမဟုတ်ပဲ အပြားလိုက်ပေါ့ ဖြတ်ထုတ်ပေးတာပါ ..သူကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လို dimension လေးတွေကို ပေးမလဲဆိုတာကို သိထားရမှာပေါ့ ဥပမာ round မှာဆိုရင် radius တို့ဘာတို့ပေါ့…အောက်မှာတော့ Chmafer feature ရဲ့ dimension schema လေးပါ သူကို အသုံးပြုဖို့ဆိုရင် user ဘက်ကနေ ဘယ်အရာလေးတွေကို ကြိုင် သိထားရမလဲဆိုတာလေးကို ပြောတာပါ …ကိုမှာက ဘယ် dimension တွေရှိတယ် အဲဒါမလို့ဘယ် schema ကို အသုံးပြုမယ်ပေါ့…concept လေးကိုပြောချင်တာပါ။
အောက်မှာ chamfer လေးနဲ့ သူ့ရဲ့ dimension schema လေးတွေကို ဘယ်နေရာမှာပြောင်းရမလဲဆိုတာလေးကို ပြထာပါတယ် သူ့မှာလဲ round feature မှာလို transition ဆိုတာလေးပါတယ်နော် round feature မှာပြထားပြီးတဲ့အတွက် မိဘာသာစမ်းသပ်ကြည့်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်….
ံHole Feature လေးကို လည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားပါအုန်းမယ်...ဖတ်တဲသူရှိမရှိတော့မသိဘူး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ကွန်တော်သိထားတာလေးတွေဟာတစ်နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပေါ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် (၀ါ) အများအတွက် အကျိုးဖြစ်ပါစေလို့ မျော်လင့်ပါတယ်..Pro/E software (CAE Software ပေါ့ ) အ၇မ်းကြီးကိုကျယ်ပြန့်နက်နဲ့လွန်းပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ part model တွင်မှာကို ထက်ခွဲထားသေးတယ် ...solid, composite, sheetmetal , bulk ဆိုပြီးပေါ့ အဲဒါတွေကတော့ advance ပိုင်းလေးတွေပေါ့ အဲ့ဒါမလို့ အကုန်လုံးကိုပိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ တော်တော်ခက်ခဲမယ်ထင်တယ်... ကျွန်တော်အတ်နိုင်ဆုံးပေါ့ ဖတ်တဲသူတွေလဲ မရှုတ်သွားအောင်တော့ post လေးတွေကိုတော့ တင်သွားပါမယ် ....နောက်ပိုင်းတွေမှာ Sketch, Assembly , Drawing , manufacturing စတဲ့ ဟာလေးတွေကို အပိုင်းလိုက် introduction ပေါ့ကျွန်တော်သိသလောက်ဆွေးနွေးသွားပါ့မယ်..
07-24-2012 07:11 AM #17
ProE ဆော့ဖ်ဝဲက အင်စတော လုပ်ရတာ တော်တော်ခက်တယ်ဆိုပဲဗျ။ imzero အင်စတောလုပ်တုန်းက အတွေ့အကြုံလေးတွေပြန်ရေးပေးပါလားဗျ။ တခြား ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
07-24-2012 12:39 PM #18
ဟုတ်ကဲပါ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အခုလို သတိပေးအကြံညဏ်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တာ့် တုန်းကအတွေအကြုံလေးတွေကို တစ်ခြားခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ခွဲပြီးတင်းပေးထားပါမယ် အစ်ကို ..
Last edited by imzero; 07-24-2012 at 12:45 PM.
Quick Navigation ProE Top
ဒီနှစ် BE အီလက်ထရောနစ်က သင်ခန်းစာတွေကို ဆွေးနွေးကျရအောင်
By snowwhite rhi in forum အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ
Last Post: 09-15-2011, 11:27 PM
Pro/E MECHNAICAအကြောင်လေးတွေ share ရအောင်
By imzero in forum ProE
By moenyo in forum အထွေထွေ ဗဟုသုတ
By yeminhlaing in forum ဆွေးနွေးချက်များ
Last Post: 12-23-2008, 01:21 PM